Imibuzo ngemishini yobuso ye-hydra
1. Kukangaki kufanele ngenze ukuhlanza okujulile ngogwebu oluncane? Ingabe kulungile ukuhlanza njalo? Ingabe umshini wenza isikhumba sibe mncane? Ikhwalithi yesikhumba yomzimba womuntu izowa ngokuzenzakalela phakathi nomjikelezo wezinsuku eziyi-17-28. Njengoba iminyaka ikhula, izohlala esikhunjeni, okuyiyona imbangela ye-d ...
Abantu abaningi bathola ama-tattoo ngenhloso yemfashini, kepha bafuna ukuwasusa ngemuva kwesikhashana. Kuma-salon wobuhle, ukususa i-tattoo sekuyimakethe entsha. Ngabe i-Q ingashintsha imishini ye-laser kuma-salon wobuhle isuse ama-tattoos? Amandla laser kungaba 250W, 500W, noma ngisho nangaphezulu. Umshini wokususa i-tattoo kumele usebenzise i-la ...
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bajwayelene nedivayisi yobuhle be-hydra ebusweni, ithandwa kakhulu manje. Le divayisi yobuhle ingabizwa ngokuthi inkosi yokuhlanza ubuso. Kepha abantu abaningi abaqondi ukuthi kungani ingahlanza isikhumba kahle kangaka? namuhla sizokhuluma ngokuthi i-hydra instrument instrument clea ...
Imiphumela yedivayisi ye-PDT yemibala ehlukile
Ukuthuthuka kwekhwalithi yempilo sekwenze abantu baqala ukujabulela impilo. Kulezi zinsuku, ama-beauty salon abe yindlela yabantu yokujabulela impilo. Abantu bafuna ukuzenza bahle futhi bahle ngokwengeziwe. Ukunakekelwa kobuso ngokwemvelo sekuyinto ethandwayo kuma-beauty salon. Abantu abaningi banentshisekelo enkulu ...
Ingabe kufanelekile ukususwa kwezinwele ebusika? Imuphi umkhiqizo wezinto zokususa izinwele olungile?
Kwabesifazane, izinwele eziqinile akuyona into ejabulisayo ukusho. Abantu abaningi bakhetha ukuya kuma-salon wobuhle ukuze kususwe izinwele ezingenabuhlungu ehlobo ehlobo. Manje sekungene ubusika, futhi abesifazane abaningi bafuna ukusizakala ngalesi sikhathi. Ukususwa kwezinwele, ungabukisa ngomzimba wakho lapho kufika ihlobo! Ngabe ...
Mayelana nokususwa kwezinwele ze-Laser
Umbono wokususwa kwezinwele ze-laser: Ukususwa kwezinwele ze-Laser kusekelwe kumgomo wokukhetha amandla we-photothermal. Ngokulungisa okunengqondo amandla we-pulse nobubanzi be-laser wavelength, i-laser ingangena esikhunjeni ukuze ifinyelele kuzimpande zezinwele. Amandla wokukhanya abso ...